Noferan’i Zambia Indray Ny Vidin’Ny Katsaka, Ka Mahasorena Ny Banky Mondialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2012 3:47 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, русский, Français, Swahili, 繁體中文, 简体中文, English
Maharitrafo goavana fahandroana Nshima, Zambia 2008. Saripika Mark Hemsworth (nahazoana alalana)
Efa nampisaraka fianakaviana nahatonga rotaka ara-tsakafo tao Zambia tsindraindray ny Nshima, zavatra nahandroana vita avy amin'ny koban-katsaka. Izay no antony mahatonga ny fitondrana taty aoriana manara-maso ny fambolena, fiotazana, fividianana sy fivarotana ny koban-katsaka amin'ny mpanjifa.
Lohahevitra lehibe kokoa any amin'ny faritra mpitrandraka tahaka an'i Copperbelt sy ny faritra be mponina mifamezivezy toy ny any Lusaka renivohitra, ny famokarana katsaka satria miankina amin'ny fivarotana azy io ny ankamaroan'ny olona miasa any. Mifanaraka amin'izany koa, ny katsaka no mamaritra ny tondro politikan'ny firenena.
Nandrisika ny fitondrana Zambiana ny Banky Mondialy tamin'ny volana mey mba tsy hitsabaka amin'ny alalan'ny famerana ny vidin'ny katsaka farany ambony indrindra amidin'ny tantsaha amin'ny Sampandraharahan'ny Tahirin-tsakafo sy amin'ireo hafa tafiditra ao amin'ny rojon'ny fandraharahana ara-pambolena. Na dia eo aza izany antso izany, nanambara ny vidin'ny katsaka ambony indrindra amin'ity taona ity ny Minisiteran'ny Fambolena mba ho K65.000 (eo ho eo amin'ny 13 dolara amerikana) ny vidin'ny lasaka-na 50 kilao.
Nitsikera ny fanapahan-kevitra ny talen'ny Banky Mondialy any Zambia, Malawi ary Zimbabwe, Atoa Kundhavi Kadiresan amin'ny filazany fa ambakaina ny tantsaha Zambiana mahantra satria efa mividy katsaka any amin'izy ireo amin'ny fikendrena hivarotra azy indray amin'ny vidiny ambonimbony kokoa any amin'ny Sampandraharahan'ny Fitehirizana Sakafo ny mpanangom-bokatra. Nomarihan'i Kadiresan ihany koa fa manahy tokoa ny Banky Mondialy tsy noho ny tsy fisian'ny politikam-panjakana maharitra hanohanana ny fitomboam-bokatra eo amin'ny fambolena ihany, fa kely loatra ihany koa ny famoronan'asa sy ny fampihenana ny fahantrana vitany.
Azo afahan-tsiny ihany i Kadiseran. Miodina eo amin'ny katsaka manko ny tontolon'ny fambolena any Zambia, tsy lazaina ny voka-mpambolena sy fiompiana hafa. Vokarin'ny tantsaha miatrika haintany mahazatra mandritra ny fotoanan'ny orana, miatrika fahalafosana sy tsy fahampian'ny zezika ary ny fahasarotan'ny fitateram-bokatra mankany an-tsena ny ankamaroan'ny katsaka vokatra.
Nirotaka ny Zambiana tany amin'ny faritra Copperbelt sy Lusaka tamin'ny 1986 fa niakatra dia niakatra ny vidin'ny katsaka nefa tsy nitombo ny fidiram-bola. Efa-taona taty aoriana aza moa dia niteraka fikasana hanongam-panjakana ny fiakaran'ny vidiny.
Niteny toy izao ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana Emmanuel Chenda nandritra ny fanambarana ny vidin-katsaka vaovao:
Nandray izao fanapahan-kevitra izao izahay hiarovana ny fitoniana ara-tsakafo eto amin'ny firenena sy mba tsy ho kivy amin'ny fambolena azy ihany koa ny tantsaha madinika amin'ny taom-pambolena manaraka, mba ho afa-mifaninana eo amin'ny tsena iraisampirenena ny katsaka zambiana, hobanjinin'ny fitondrana, ankoatra ny paikady hafa, ny fidinan'ny masonkarena amin'ny famokarana azy amin'ny alalan'ny fanapariahana ny fambolena sy ny fitaterana ireo mpiasan'ny fanapariahana mba hampitomboana ny famokarana eo amin'ny tantsaha madinika.
Nambaran'i Chenda ihany koa fa eo am-pametrahana lamin'asa hananganana toera-panangonam-bokatra hafa ny fitondrana ao anatin'ny fandaharan'asa lavitr'ezaka ho fisorohana ny fandanindaniam-poan'ny Sampandraharahan'ny Fitehirizan-tsakafo (FRA). Andro vitsivitsy mialoha ny fanambaran'ny minisitra manko, tahirin-katsaka lò maro dia maro any amin'ny distrika maro manerana ny firenena no nopotehin'ny FRA. Nilaza i Chenda:
Tiako ny manambara amin'ny firenena fa ny ankamaroan'ny fahasimbam-bokatra eo ambany fitantanan'ny FRA hitantsika teo dia noho ny toerana fitehirizana tsy mifandraika amin'ny ilàna azy sy tsy manara-penitra… Ho fiatrehana izany fanamby izany, efa nametraka toera-panangonam-bokatra hafa ho fandaharan'asa lavitr'ezaka ny fitondrana
Tafiditra ao anatin'ny asa tohanan'ny International Security Network (ISN) ho ao anatin'ny fiaraha-miasa hitadiavana ny feon'olo-tsotra eo amin'ny sehatry ny fifandraisana iraisampirenena sy ny fitoniana manerantany ity lahatsoratra (teny anglisy) ity sy ny amin'ny teny Espaniola, Arabo ary Frantsay. Tsidiho ny bilaogin'ny ISN ary jereo ireo tantara maro mifandraika amin'izany.
Sary nasongadina ny katsaka zambiana nopihan'i Choconancy1 ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).